Sales kushandisa michina - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Sales kushandisa michina
Sales automation chirongwa chakagadzirirwa kukubatsira iwe kuwana mibairo iri nani kubva kuboka rako rekutengesa nekubvisa nguva inopedza nekudzokorora mabasa kubva kumabasa avo ezuva nezuva. Chinangwa chekutengesa otomatiki ndechekubatsira iwe kuti uwane zviitwe munguva shoma kuti iwe ugone kushandisa yakawanda nguva uchiita izvo zvakakosha zvakanyanya kune rako bhizinesi nebasa rako. Iko kugona kuita otomatiki mabasa ekutengesa kuitira kuti vatengesi vako vatarise pane zvakakosha zvinhu, sekuvhara madhiri. Vatengesi vako vachapedza nguva shoma pabasa rekutungamira uye yakawanda nguva pakutsvaga, kuvhara madhiri, uye kuita kutengesa. Iyo huru nzira yekusunungura yako nguva kuti iwe ugone kutarisa kune yakakwira-kukosha mabasa ekutengesa senge kutsvaga uye kudzidzisa vatengi pane chako chigadzirwa kana sevhisi. Izvo zvakakosha kuti uve nehurongwa munzvimbo iyo iyo inobvumidza iwe kuti ugare zviri nyore kutaurirana nevatengi uye tarisiro pasina kupedza maawa uchitsvaga email kero kana nhamba dzefoni.
Mbiru dzeKutengesa Mashandisiro
Iyo mbiru nhatu dzekutengesa otomatiki ndeyeCRM, kushambadzira otomatiki, uye zvishandiso zvekutengesa. CRM ndeyevatengi hukama manejimendi manejimendi system. Kana iwe usina CRM urikusiya mari patafura. A CRM (Customer Relationship Management) chishandiso chakakosha kune chero bhizinesi, uye zvakatonyanya kukosha kune bhizinesi ine eCommerce webhusaiti. Sales automation inzira inobatsira vatengesi kuti vabudirire sezvinobvira. Zvakakosha kuti vatengesi vave vanobudirira sezvinobvira nekuti kuwanda kwekutengesa kwavanoita, inowedzera mari inoita kambani yavo, uye nekuwedzera mari inoita kambani yavo, ndipo pavanobudirira zvakanyanya sevhisi. Pane zvinhu zvitatu zvakakosha kukutengesa otomatiki: kuteedzera, otomatiki, uye kuburitsa. Sales automation ndeyekushandisa software kuti ubvise zvakajairika uye zvinodzokorora mabasa kubva pane yako yekutengesa maitiro. Iyo inogona kukubatsira iwe kusunungura yako nguva yekutarisa pane zvakanyanya kukosha zvikamu zvebhizinesi rako. Muenzaniso wakanaka wekutengesa otomatiki kugona kuronga ekutevera-emaemail. Kana iwe uri muridzi webhizinesi diki kana mutengesi wekutengesa, pamwe uneta nekushandisa yakawandisa nguva pane manejimendi uye isina kukwana nguva pakutengesa. Vazhinji varidzi vemabhizinesi madiki uye ma reps ekutengesa vanoshandisa maspredishiti kana maturusi senge Excel kuchengetedza mabasa, kutungamira, uye mikana.
Bhizinesi rako richabatsirika sei kubva kuSales Automation?
Sales automation ndiyo yegoridhe goose yekutengesa. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuzviita iwe seanobudirira sezvinobvira kana zvasvika pakuvhara kutengesa. Iyo nzira yekuvhara zvimwe zvekutengesa nekukurumidza uye zvakanyanya uye zvinobatsira kuona kuti urikushanda pane chaiyo tarisiro yebhizinesi rako. kumwe kwekukanganisa kwakanyanya kwandinoona varidzi vemabhizinesi madiki vachifunga ivo nekuti ivo bhizinesi diki havadi maturusi uye otomatiki. Asi otomatiki haingobvise vanhu kubva muchiitiko ichi, inobatsirawo kuti bhizinesi rako ribudirire uye riwedzere kutyisa. Sales Automation inobatsira mabhizinesi kumhanya zvakanyanya uye anobatsira kuchengetedza nguva. Inogona kukubatsira iwe kuchengetedza nguva uye kuvaka hukama. Izvo zvanzi Sales Automation inogona kuchengetedza kusvika maawa makumi matatu pasvondo mune mamwe mamiriro. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutarisa pazvinhu zvinonyanya kukosha kwauri.